ဒီနေ့မနက်မှာဆုံးသွားတဲ့အဘွားအတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ်အမှာစကားတွေဆိုခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို – Maythadin
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မနက် (၂) နာရီခွဲမှာ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အဘွားဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားကြောင်း စိတ်မကောင်းဖွယ်ကြားသိရပါတယ်။ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့ သူရမောင်ချို တို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကလည်း သူတို့ချစ်ရတဲ့အဘွားအတွက် ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ် ။
ဘွားဘွားကြီးရေ ဘိုးဘိုးကြီးနဲ့တွေ့နေပီလား ?? တွေ့ရင် ရန်မဖြစ်ကြနဲ့နော် ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနော် စားချင်တာတွေလဲစားတော့နော် ဘိုးဘိုးကြီးက အကုန်ဝယ်ကျွေးမှာတဲ့ အဘွားစားချင်တာပြောလိုက်နော် သမီးကိုတော့ cherry သီးတွေကျွေးနော်ဘွားဘွားကြီး သမီးစားမယ်နော်
သီဟိုစေ့တွေအမြဲသိမ်းထားတတ်တဲ့အဘွား .. အမြဲခိုးစားတဲ့မြေး .. ကျွေးရှာပါတယ် .. ခိုးမစားတော့ဘူးနော် အဘွား .. ကားလဲအမြဲဂရုစိုက်မောင်းပါ့မယ် မေကြီးကိုလဲဒီထပ်မက ဂရုစိုက်ပါ့မယ် ..အဘွားစိတ်ချလက်ချနဲ့သာ ဘိုးဘိုးကြီးနဲ့လိုက်သွားနော် … ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။
အဘွားကနားမကြားတော့တခါမှ အဘွားကိုအရမ်းချစ်တယ်လို့ မပြောဖူးလိုက်တာနောင်တအရဆုံးပဲ ဆိုပေမယ့် အဘွားဖြစ်သူကို အရမ်းချစ်ကြောင်း လည်း ရေးသားထားပါသေးတယ် ။ ပရိသတ်တွေကလည်း ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အဘွားအတွက် မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရကြောင်း မှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။
Source : Chan Myae Mg Cho
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီေန႕မနက္ (၂) နာရီခြဲမွာ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳရဲ႕ အဘြားျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ၾကားသိရပါတယ္ ။ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳနဲ႕ သူရေမာင္ခ်ိဳ တို႔ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ကလည္း သူတို႔ခ်စ္ရတဲ့အဘြားအတြက္ ဆုေတာင္းစကားေလးေတြ ကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္
ဘြားဘြားႀကီးေရ ဘိုးဘိုးႀကီးနဲ႕ေတြ႕ေနပီလား ?? ေတြ႕ရင္ ရန္မျဖစ္ၾကနဲ႕ေနာ္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနေနာ္ စားခ်င္တာေတြလဲစားေတာ့ေနာ္ ဘိုးဘိုးႀကီးက အကုန္ဝယ္ေကြၽးမွာတဲ့ အဘြားစားခ်င္တာေျပာလိုက္ေနာ္ သမီးကိုေတာ့ cherry သီးေတြေကြၽးေနာ္ဘြားဘြားႀကီး သမီးစားမယ္ေနာ္
သီဟိုေစ့ေတြအၿမဲသိမ္းထားတတ္တဲ့အဘြား .. အၿမဲခိုးစားတဲ့ေျမး .. ေကြၽးရွာပါတယ္ .. ခိုးမစားေတာ့ဘူးေနာ္ အဘြား .. ကားလဲအၿမဲဂ႐ုစိုက္ေမာင္းပါ့မယ္ ေမႀကီးကိုလဲဒီထပ္မက ဂ႐ုစိုက္ပါ့မယ္ .. အဘြားစိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႕သာ ဘိုးဘိုးႀကီးနဲ႕လိုက္သြားေနာ္ … ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႕အတူ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေရးသားခဲ့ပါတယ္ ။
အဘြားကနားမၾကားေတာ့တခါမွ အဘြားကိုအရမ္းခ်စ္တယ္လို႔ မေျပာဖူးလိုက္တာေနာင္တအရဆုံးပဲ ဆိုေပမယ့္ အဘြားျဖစ္သူကို အရမ္းခ်စ္ေၾကာင္း လည္း ေရးသားထားပါေသးတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြကလည္း ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳရဲ႕ အဘြားအတြက္ မိသားစုနဲ႕ထပ္တူ ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေတြေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္ ။
ပြည်သူတွေနဲ့အတူ စုပေါင်းပြီး မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်က မီးဘေးသင့်တဲ့နေရာကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Oasix